Mashandisiro ekushandisa Apple Diagnostics paMacs akatengeswa kubva muna Chikumi 2013 zvichienda mberi | Ndinobva mac
Ichi Chishanu chapfuura takaparura iyo kutanga kweaya maviri mafundo iyo Apple pachayo inotiratidza kuti tigone kuita hutachiona hwehutachiona hweMac yedu uye nhasi, Muvhuro, tinotanga chikamu chechipiri chedzidziso iyi kune avo vashandisi vane Mac kubva munaJune 2013 zvichienda mberi.
Mune ino kesi zita rinoshanduka kuzvikwata izvi uye nepo zveJune 2013 modhi kumashure uyu bvunzo inonzi Apple Hardware Bvunzo (AHT) mushanduro dzinotevera izvi zvinonzi Apple Diagnostics (AD). Chaizvoizvo maitiro acho akafanana chaizvo uye ivo vanongochinja mamwe matanho matinozombove nesarudzo yekuona yekufambira mberi bhawa kana kusarudza kutangazve bvunzo.
Apple Diagnostics inoongorora matambudziko ehurdware paMac yedu, asi mhando iyi yemuyedzo haifanire kuitwa kana michina yedu ikashanda nemazvo. Chero zvazvingaitika, zvakakosha kutaura kuti matambudziko ehurdware anowanzoonekwa neApple vashandisi vasati vatombova nawo uye zviri nyore kuwana chinoshanda chinotsiva kana kugadzirisa zvirongwa zvekuzvigadzirisa.
1 Mashandisiro ekushandisa Apple Diagnostics
2 Ruzivo rwekufunga
Mashandisiro ekushandisa Apple Diagnostics
Dzvanya zvese zvishandiso zvekunze kunze kwekhibhodi, mbeva, kuratidza, kubatana kweEthernet, uye kubatana kune chiteshi chemagetsi.
Ita shuwa kuti Mac yako iri pane yakaoma, yakati sandara, yakagadzikana, uye yakanaka-inemhepo nzvimbo, uye bvisa Mac yako.
Batidza Mac uye nekukurumidza mushure meizvozvo isu tinofanirwa kubatisisa iyo D kiyi senge iri mushanduro yaJune 2013 asati asvika. Tinobatirira pasi kusvikira skrini yaonekwa paunogona kusarudza mutauro. Paunenge wasarudza mutauro, Apple Diagnostics inoratidza bhaa yekufambira mberi.
Iko Mac inotora inotora 2-3 maminetsi. Kana paine chero zvikanganiso zvakawanikwa, Apple Diagnostics inoratidza mhinduro uye inopa mareferenzi makodhi. Nyora pasi mareferenzi makodhi usati waenderera.
Sarudza imwe yesarudzo idzi:
Kudzokorora bvunzo, tinya "Mhanya iyo bvunzo zvakare" uye tinya Command (⌘) -R.
Kuti uwane rumwe ruzivo, senge ruzivo rwevhisi uye sarudzo dzekutsigira dzinowanikwa kwauri, tinya "Get Start" kana kudzvanya Command-G
Kuti utangezve Mac yako, tinya Kutangazve kana kudzvanya R.
Kuti uidzime, tinya Shut Down kana kudzvanya S.
Kana ukasarudza kudzidza zvakawanda, Mac yako ichatanga kubva kuMacOS Kudzorera uye icharatidza peji rewebhu richikukumbira kuti usarudze nyika yako kana dunhu. Dzvanya "Bvumirana kutumira" kuendesa yako serial nhamba uye kutumira kodhi kuApple. Wobva watevedza sevhisi uye yekutsigira mirayiridzo pachiratidziri. Paunenge wapedza, unogona kusarudza Kutangazve kana Kudzima Kubva paApple menyu. Kune ino nhanho iwe unoda kubatana kweInternet. Kana iwe usina kubatana neInternet, peji richaonekwa iro rinokuudza maitiro ekubatanidza.
Kana kubatisisa pasi kiyi D panguva yekutanga hakutange Apple Diagnostics:
Kana iwe ukashandisa firmware password, zvidzime. Unogona kuidzosera kumashure mushure mekushandisa Apple Diagnostics.
Batisisa makiyi eOption-D pakutanga kuti utange kutanga Apple Diagnostics pamusoro peInternet.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » Mashandisiro ekushandisa Apple Diagnostics paMacs yakatengeswa munaJune 2013 zvichienda mberi
Iyo nyowani yeAmazon Fire TV 4k inotsigira PIP uye inokutendera iwe kurekodha zvirongwa